Indlela ukupheka ezazigxishwe amakhowe kuhhavini
Sonke uthando izitsha Baked. Ngifuna ukwabelana nawe iresiphi siqu sokulungiselela ngaphandle amakhowe eyayigcwele. Pheka eyayigcwele amakhowe kuhhavini nzima ukubhekana ukuthi iyiphi, ngisho imfundamakhwela senkosikazi. Kodwa abathandi mushroom bayokwazisa ukunambitheka engavamile lokhu "namanzi" nokukhanya Ungadla ashisayo. amakhowe eyayigcwele kuhhavini kuyoba iyisivunulo ikhona, ngisho zikanokusho kunazo, itafula zemikhosi. Kulokhu, kufanele ephelele inkululeko yokuzikhethela, ngoba ukugxusha ngoba ukugxusha amakhowe ungakwazi yini ukubhala imigomo ehlukene kakhulu kuze kufike emcabangweni wakho tando suffice.
Ngakho, indlela yokwenza amakhowe ezisebenzi? Ukulungisa amakhowe, udinga ukuthenga amakhowe nge ofeleba enkulu (uma ulungiselela inani elithile labantu, okungenani 1 isigqoko isivakashi ngasinye). Manje thina ukukunikeza amakhowe eyayigcwele kuhhavini, kwelinye samuntu leresiphi, ne silulindele izigqoko 16.
Izithako: thatha 16 amakhowe amakhulu, 300 g inkukhu, 1 onion esikhulu, izinongo, ukhilimu omuncu, 200 amagremu of ushizi (grade mhlawumbe eziqinile), 1 tbsp. l. breadcrumbs, imayonnaise, usawoti, ukunambitheka umhlabathi emnyama, impuphu, parsley uvumelanise.
indawo Okokuqala ukupheka inkukhu. Futhi kuze kube iphekwe, ukwenza ezinye amakhowe. Bayobizwa ngokuphelele engahashazanga ngaphansi kwamanzi agobhozayo ukuhlanza, uma kunesidingo, ukususa ikhasi. Thina ukususa stem mushroom futhi uwugcine ngokwehlukile. Bese cap kanye stem sokususwa emanzini, kancane anosawoti abilayo (0.5 amalitha amanzi 1 tbsp. Of usawoti) amaminithi angu 10. Ukuze cap ngokushesha Kwadlula, zingabekwa kuwo ipuleti ubukhulu ezifanele. Lapho kuphekwe, kufanele isuswe ngu ngobumnene wamshaya colander sokukhipha ikusebenzise kudambe.
Kuze amakhowe kuphole, inkukhu kufanele ochotshoziwe, futhi anyanisi uthathe izindandatho uhhafu. Khona-ke futhi Stipe fake uthathe cubes, uthele 1 spoon samafutha zemifino ku pan ukuthosa Fry onion imizuzu 2-2.5, kungaba elengeziwe uma uthanda anyanisi crispy ngaphezulu. Kukhona futhi wengeze inkukhu, ukhilimu omuncu chaza ufulawa, inkathi ukunambitha kanye nezinongo, konke okufanele ibila on ukushisa low imizuzu emihlanu, kuze uqweqwe. Ukugcwalisa kunoma isiphi isimo akufanele kube obukhulu, kodwa futhi ngeke uketshezi, kungcono ukungaguquguquki medium. Ukulungele? Khona-ke sekuyisikhathi izinto the CAPS amakhowe.
ukuxubha pan ne amafutha zemifino ngokucophelela, wagqoka amakhowe akhe ofeleba amapuleti phansi phezulu. hat ngamunye ukubeka ngaphambilini walungisa ukugxusha, waphendukela slide phezulu. Ekupheleni ushizi kumele uthathe tincetu mncane (noma grate) bese mix it nge breadcrumbs isipuni. Ngamunye spoon isigqoko rammed futhi begcoba kancane nge imayonnaise, futhi phezu ukubeka ingcosana ushizi exutshwe breadcrumbs, ushizi ncibilika ukuhlobisa izigqoko zethu.
Beka amakhowe eyayigcwele kuhhavini, osuke usushisa kakade 180 ° C (noma-microwave oven). Uma kuhhavini kuzothatha imizuzu engaba yishumi kuze ushizi elicibilikile, ushizi ke microwaving umzuzu encibilikisiwe ngokuphelele 4. Esinye endabeni amasu: ukudonsa pan kuhovini ngokucophelela babeka wabhaka amakhowe eyayigcwele ngeholide isidlo enhle, ukuhlobisa nge zasemazweni, futhi ukukhonza! Bon appétit!
Ngisho nalabo abangekho babathanda kakhulu amakhowe, uzokubona isidlo sakho. amakhowe eyayigcwele kuhhavini kuyodingeka ukunambitha konke, ngoba ihlanganisa ezimbili umkhiqizo esihlwabusayo kakhulu futhi unempilo.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukweluleka eyayigcwele amakhowe nezimfanzi noshizi, ubhekeni neqanda, amaqanda izigwaca, inyama nengulube nezinye izithako. Into esemqoka ukuthi umzamo wakho ngokuqinisekile baziswa.
Indlela ka-birch juice - isiphuzo enempilo futhi tastier
Ikhekhe imana. iresiphi Quick - ekutholeni Omuny
Izithako, izindlela kanye ikhalori pie namazambane
Ubukhulu Special. Inani zezomthetho ubudala ekhethekile